1Password, njikwa okwuntughe nke na-eche na Linux | Site na Linux
1Password, njikwa okwuntughe nke na-eche na Linux
Joaquin Garcia Cobo | | Aplicaciones, GNU / Linux
Ndị ọrụ Gnu / Linux enweela nchekwa nke ndị ọrụ ndị ọzọ nke sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ enwebeghị, mana nke a anaghị eme ka ọ bụrụ usoro nzuzu.
Ọ bụ ya mere enwere ngwaọrụ maka Gnu / Linux anyị nwere ike ịwụnye ma jiri ya mee ka data na kọmputa anyị nwee nchebe.
Ee e, anyị agaghị ekwu okwu gbasara antivirus ọdịnala mana gbasara ụdị amaghị ama ngwa ọrụ dị mkpa: okwuntughe njikwa.
Onye njikwa okwuntughe na-enye anyị ohere iji okwuntughe siri ike na weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa na-enweghị iburu onye ọ bụla n'ime ha n'isi.
Na DesdeLinux anyị kwurula banyere ya otu n'ime nhọrọ ndị a, ma n’oge na-adịbeghị anya ewepụtalarị ụdị nke kwudosiri ike nke paswọọdụ jikọtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ala na nkesa Gnu / Linux. Ngwaọrụ a a na-akpọ ya 1Password.
1Password bu ngwa oru sara mbara nke oma. Site na nke a anyị na-ekwu na ndị mmepe emepebeghị otu ụdị maka sistemụ arụmọrụ ọ bụla kamakwa Emeela ndọtị maka ihe nchọgharị weebụ kachasị na ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na ndị kasị ewu ewu na ngwa na ahịa. Nke ikpeazụ na-enye anyị ohere iji 1Password na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa ọ bụla na paswọọdụ anyị nwere.
1Password nwere ọgwụgwụ-na-ọgwụgwụ izo ya ezo nchedo nke n’eme k’emere tinye okwuntughe n’udi obula. Ọ nwekwara ọrụ abụọ na-atọ ụtọ dị egwu dịka nchekwa maka phishing na nchekwa maka keyloggers. Nke mbụ na-eme ka ngwa ahụ mara saịtị ahụ na ọ bụrụ na ọ bụ saịtị aghụghọ ma ọ bụ phishing, paswọọdụ agaghị abanye. Nchedo nke abụọ na-eme ka sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ weebụ anaghị amata ntinye nke mkpụrụedemede n'otu igodo ma ya mere enweghị ike ịchọta ha.
Ndị mmepe nke 1Password ewebatala nchebe ọzọ na hichaa clipboard n'ụzọ dị otú a na ọ dịghị onye nwere ike ịchọta paswọọdụ na sistemụ arụmọrụ. Nke a nwere ike ịmasị mana ọ nwere ike bụrụ mmekpa ahụ ma ọ bụrụ na anyị emee ọtụtụ nnomi nke okwuntughe. Nke a dabere na ojiji nke ọ bụla na-enye.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ana m ekwu okwu a n'ihi na ọ dị obere na ngwa na-elekwasị anya ma ọ bụ na-egosi mmasị maka Gnu / Linux na ọ bụghị maka sistemụ arụmọrụ ọzọ, ngwa maka Gnu / Linux nwere ọrụ nke ngwa 1Password maka nyiwe ndị ọzọ enweghị.
Otu n'ime ọrụ ndị a dị na ya kernel ndakọrịta, na paswọọdụ nyochaa nke na-enyere anyị aka ịhụ ma ọ bụrụ na mmadụ na-arịọ maka okwuntughe ma ọ bụrụ na ọ dị nchebe ma ọ bụ na ọ bụghị; ozi ndi ozo banyere onye nweta ihe; ndakọrịta zuru oke na ndị isi window njikwa gụnyere ọrụ ọnọdụ abalị; na, ikekwe ihe kachasị baa uru, iji ya a siri ike search engine Bilie a Atiya usoro nke ahụ ga - enyere anyị aka ijikwa ma chọọ okwuntughe anyị ma ọ bụ ozi gbasara ha naanị n'okpuru pịrịks atọ nke oke ahụ.
ngwa Gnu / Linux nwere ọrụ ndị ngwa 1Password maka nyiwe ndị ọzọ enweghị
1 1Password nwekwara ọghọm
2 1Password nwụnye na Gnu / Linux
1Password nwekwara ọghọm
Onye njikwa okwuntughe dị ezigbo mma, ikekwe kachasị mma n'ahịa, mana ọ nwere ihu ala: ọ nwere ụgwọ ọnwa ọ bụla.
Na nke a apụtaghị na ihe ga-enwere onwe, echeghị m na sọftụwia niile ga-abụ n'efu. Ma 1Password nwere mmetụta mkpọchi nke anaghị atụ aro na ụwa nchekwa. Mgbe anyị jiri ọrụ ahụ, anyị nwere oge nnwale nke ụbọchị iri na anọ, mgbe oge a gasịrị anyị ga-akwụ $ 2,90 kwa ọnwa. Ọ bụrụ na anyị achọghị ịkwụ ụgwọ, ma ọ bụ n'ihi na anyị achọghị ma ọ bụ n'ihi na anyị enweghị ego, onye njikwa ahụ ga-akwụsị ịrụ ọrụ ma si otú a anyị agaghịzi enwe ike ịnweta okwuntughe anyị.
Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na anyị nwere ike idepụta oyiri nke okwuntughe ndị a, mana mgbe ahụ anyị nwekwara ike iji akara ngosi ma mado okwuntughe ebe ahụ, ịbụ ndị na-enweghị nchekwa.
Ọ naghị enye anyị ohere ịnweta software yana rụọ ọrụ anyị onwe anyị site na ịwụnye na sava anyị, ihe ndị ọzọ na-achịkwa paswọọdụ na-eme.
Ọ bụrụ na anyị jiri ndị njikwa okwuntughe ndị ọzọ tụnyere, ọnụahịa nke 1Password adịghị oke elu ma ọ dabara na mmemme ndị ọzọ yiri ya, mana nke a anaghị ebute mmetụta mkpọchi ahụ, ya bụ, ịdabere na usoro ihe omume ahụ, dị ize ndụ ma nọrọ ebe ahụ.
1Password nwụnye na Gnu / Linux
Itinye 1Password na sistemu Gnu / Linux dị mfe. Enwere nchịkọta maka nkesa ndị bụ isi, yabụ ọ bụrụ na anyị nwere nkesa Dabeere na Debian, anyị kwesịrị ibudata ngwugwu ụgwọ ma gbaa ya ọsọ.
Ọ bụrụ, n'aka nke ọzọ, anyị nwere nkesa na-adabere na Fedora ma ọ bụ Uhie nke na-eji sistemụ ngwugwu rpm, n'ihi na anyị ga-ebudata ngwugwu rpm ma gbaa ya ọsọ.
Anyị nwekwara ohere nke ịwụnye ya ụlọ snapstore, maka nke a, anyị ga-abanye na ntinye 1Password ma wụnye ya dị ka ngwugwu snap ọ bụla.
Maka ndị ọkachamara na-atụkwasị obi na ọdụm, anyị nwere ike ime ya site na njedebe. Iji mee nke a, anyị na-emeghe ọnụ ma dee ihe ndị a:
curl -sS https://downloads.1password.com/linux/keys/1password.asc | sudo gpg --dearmor --output /usr/share/keyrings/1password-archive-keyring.gpg
Ọzọ anyị ịgbakwunye repository:
ikwughachi 'deb [arch = amd64 banyere-site = / usr / share / keyrings / 1password-archive-keyring.gpg] https://downloads.1password.com/linux/debian/amd64 stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/1password.list
N'ikpeazụ, anyị wụnye ya site na iwu:
sudo apt melite && sudo apt wụnye 1password
Ma oburu na anyi enweghi Fedora ma obu Ubuntu ma obu ihe ndi ozo ha, anyi achoghi ngwugwu snap, kama anyị na-eji Manjaro ma ọ bụ Arch Linux, mgbe ahụ, anyị ga-eme ihe ndị a:
curl -sS https://downloads.1password.com/linux/keys/1password.asc | gpg - mbubata
Mgbe anyị mechara iwu ahụ dị n'elu, anyị gbakwunye ngwugwu 1Password gọọmentị na ebe anyị na-edebe ihe:
git mmepụta oyiri https://aur.archlinux.org/1password.git
Anyị na-eme nwụnye ya na iwu ndị a:
cd 1password makepkg -si
Ma ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu na ndị a echichi, Nkwado 1Password na-enye anyị ụzọ ndị ọzọ echichi, mana ọ bụghị maka ndị ọrụ novice.
Ọnwa ole na ole gara aga, enweghị m obi ike maka ndị njikwa okwuntughe, amaghị m etu ha si arụ ọrụ ma amaghị m nke ọma banyere nchekwa ha nyere, mana ebe m bidoro ịnwale ya, enwere m obi ụtọ na ụdị sọftụwia a ma enwere m ya isi ngwaọrụ. 1Password bu ezigbo ozo, mana ihe mkpọchi na emeputa na enye m nsogbu nke ukwuu o yikwara ka o dochaghi anya idozi ya. Enwere ike ma ọ bụrụ na edozi nsogbu a, 1Password bụrụ otu n'ime ndị njikwa okwuntughe kacha mma maka Gnu / Linux.
Ọ bụ ya mere iji ya na ọkwa onwe gị, ọ dị ka akwadoghị ya. Agbanyeghị, na ọkwa azụmaahịa, ebe achọrọ nchekwa dị elu yana sọftụwia akwadoro karịa nke onwe, 1Password dị ka nhọrọ kacha mma: maka nkwado ọ na-enye yana maka ọsọ ọ na-enye ịme iji sistemụ nchekwa emeghị ka anyị belata ọrụ.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-achọ sọftụwia yiri nke ahụ, ndụmọdụ m kachasị mma bụ na ibudata ụbọchị iri na anọ ikpe ma ị nwalee ya na saịtị ndị na-adịghị mkpa yana iji okwuntughe ahaziri iche nke ị nwere ike icheta, jiri ya mee ihe ị nwere ike ma tụlee ma 1Password ọ masịrị gị n'ezie ma ọ bụ na ọ bụghị. Emere m ya ma nyocha m ngwa ngwa.
Isi mmalite na onyonyo .- 1Password Blog
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » 1Password, njikwa okwuntughe nke na-eche na Linux
Ihe 3 kwuru, hapụ nke gị
eme Ọnwa 4
Anaghị m atụkwasị obi n’ihe ọ bụla site na ndị njikwa okwuntughe n’igwe ojii. Ma 1Password, ma ọ bụ Bitwaden, ma ọ bụ LastPass… nke m nwere nsogbu… N'oge na-adịghị anya, ha na-akwụsị inwe nchedo nchebe, n'agbanyeghị na enweghị m ihe ọ bụla "dị mkpa" m ga-edebe.
Anaghị m atụkwasị obi na Mozilla ma ọ bụ Google na ihe nchọgharị ha ... nke m bụ KeepassXC na mpaghara, ma karịa ihe niile, ụkpụrụ nke m. Achọrọ m onye njikwa na ụkpụrụ ahụ.
Joaquin Garcia Cobo dijo
Ndewo, enwere m obi abụọ banyere ndị njikwa okwuntughe, mana mgbe m nwara ụdị ndị kachasị ọhụrụ, enwere m mmasị na ha nke ukwuu ma echere m na ha anaghị emepụta nchedo n'agbanyeghị na m nọnyeere gị na igwe ojii bụ ihe dị egwu, nhọrọ kachasị mma bụ nwee ya na ihe nkesa ma ọ bụ na otu kọmputa ahụ, n'enweghị obi abụọ.
Daalụ nke ukwuu maka ịza ajụjụ 🙂
Zaghachi Joaquin García Cobo
O di nwute, mba. Ọ ga-ekwe omume onye njikwa okwuntughe iji ihe nkesa rụọ ọrụ ụfọdụ ma tụkwasị ya obi.
Emeelarịrị gam akporo 12 beta na ndị a bụ akụkọ ya
Ndị njikwa okwuntughe: kedu ndị dị maka GNU / Linux?